Shiinaha warshad gelatin biyo siisay iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Alaabta ceyriinka ah ee samaynta peptides-ka collagen - iyo gelatin biyo leh - waa collagen Laakiin molecule-ka kolajka peptide waa wax yar, culeyskiisuna yahay molikiyuul ka yar 10,000 g / mol. heerar urursan.
Gelatin Hydrolyzed waa natiijada gelatin ee hydrolysis. Ficilka wax lagu nadiifiyo waxaa loola jeedaa in lagu jebiyo iyadoo la isticmaalayo biyo. Taasi waa sida saxda ah sida loo sameeyo gelatin-biyoodka. Ka dib markaad gasho qubeyska enzyme, silsiladaha borotiinka dabiiciga ah ee gelatin waa la jebiyey. Waxa hadhay waa maado si fudud jidhkeenu u nuugo una dheef shiido.
Gelatin Hydrolyzed isla markiiba ku milmaa dareerayaasha kulul ama qabow. Si ka duwan gelatin-ka caadiga ah, gelatin-biyoodka ma sameyn doono walax jel ah. Xaqiiqdii, kama beddeleyso muuqaalka gabi ahaanba. Tan iyo markii ay si fudud u milmaan,gelatin biyo leh way fududahay in lagu dhex daro dhowr cabitaanno ah iyo cunto karinta. Marka ay timaado in lagu daro cuntadaada, waa ikhtiyaarka ugu habboon ee isticmaalaha.
Premium Hydrolyzed Collagen Peptides: Waxay taageertaa caafimaadka wadajirka ah, maqaarka, timaha, murqaha iyo lafaha. Waxaa ka mid ah Enzymes-ka dheefshiidka ee si fiican u nuugista iyo Spirulina Dabiiciga ah ee loogu talagalay borotiinka amino acids-ka ee dheeraadka ah + naxaasta si loo taageero sameynta kolajka.
Faa'iidooyinka Da'da Kahortaga: Collagen wuxuu caawiyaa hagaajinta unugyada maqaarka si loo adkeeyo, loo adkeeyo maqaarka loona taageero keratin soosaarka si xoog leh, koritaanka timaha jilicsan Waxaa laga yaabaa inuu hagaajiyo muuqaalka cellulite adoo soo celinaya qaab dhismeedka caadiga ah ee unugyada maqaarka.
Waxqabadka Wadajirka ah ee Caafimaadka leh: Collagen waxay taageertaa unugyada isku xira caafimaadka leh ee ku jira carjawda, seedaha, muruqyada, muruqyada iyo lafaha si loo wanaajiyo dhaqdhaqaaqa loona kordhiyo dabacsanaanta.
Sumad Nadiif ah: Waxaa lagu sameeyay waxyaabo dabiici ah, oo aan ahayn GMO. Waa bilaash walxaha ilaaliya, midabaynta synthetic, dhadhanka macmalka ah, iyo xasaasiyadaha ugu caansan. Lagu sameeyay gudaha Mareykanka xarun ku habboon GMP.
Ku qanacsanaanta macaamilka: Haddii aadan ku qanacsanayn sabab kasta ha noqotee, si fudud ula xiriir kooxdayada daryeelka macaamiisha annana waannu ku daryeeli doonnaa.
Hore: Collagen Hydrolyzed
Xiga: Bovine Collagen Peptides